Madaxweynaha xiriirka Kubada Cagta Afrika (CAF) ayaa shaqada laga joojiyey muddo 5 sano… – Hagaag.com
Posted on 23 Nofeembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
FIFA ayaa shaacisay maanta oo Isniin ah in Rugta Garsoorka ee Guddiga Qiimeynta anshaxa Madaxa Banaan ay ka joojisay Axmed Axmed, Madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta Afrika (CAF) muddo shan sano ah inuu ku dhaqmo wax kasta oo la xiriira kubada cagta.
FIFA waxay ku sheegtay – qoraal ay ku daabacday bogeeda – in garnaqsi dheer kadib, Rugta Garsoorka ay xukuntay, iyadoo lagu saleynayo macluumaadka ay soo aruurisay guddiga baaritaanka, in Axmed Axmed uu jabiyay waajibaadka daacadnimada, jabiyay qawaaniinta isla markaana uu bixiyay hadiyado iyo waxyaabo faa’iidooyin kale leh, wuxuu si khaldan u maamulay lacago isla markaana ka faa’iideystay booskiisa madaxweynaha CAF. Sida ku xusan qawaaniinta FIFA oo in la raaco ah.
Bayaanka ayaa intaas ku daray, “Sidaas darteed, Rugta Garsoorka waxay soo gabagabeeyeen in Mudane Axmed uu jebiyey qodobbada 15, 20 iyo 25 ee qaabka hadda ee xeerarka FIFA ee anshaxa, iyo sidoo kale qodobka 28 ee qeybta sanadkii 2018, waxay ku ganaaxday isaga in laga joojiyey ku-dhaqanka dhammaan howlaha kubada cagta ee la xiriira (maamulka, isboortiga ama kuwa kale) ee labada heer ee midka gobolka iyo kan caalamiga muddo 5 sano ah, waxaa u dheer ganaax dhan 200,000 oo franc Swiss ah (220,000 oo doolar). “
Bayaanka ayaa lagu daray, “Baarista ku saabsan habdhaqanka Mudane Axmed xilkiisii ​​madaxtinimo ee CAF muddadii u dhexeysay 2017 iyo 2019 waxay la xiriirtaa arrimo badan oo maamul oo la xiriira CAF, oo ay ka mid yihiin abaabulka iyo maalgelinta safarada Xajka iyo Cumrada ee Makka, iyo ka qeyb qaadashadiisii ​​CAF ee la macaamilka shirkada (Tactical Steel) ee Qalabka isboortiga iyo howlo kale.
Bayaanka ayaa lagu soo gabagabeeyay, “Mudane Axmed waxaa lagu wargaliyay qodobada go’aanka maanta, oo ah maalinta ay dhaqan gali doonto ciqaabta shaqo joojintiisa”.
Xoghayihii guud ee CAF ee geeriyooday Amr Fahmy wuxuu Axmed ku eedeeyay laba sano ka hor musuq maasuq maaliyadeed iyo faraxumeyn xagga galmada ah, kadib markii loo magacaabay xilkiisa dhammaadkii 2017.
Dhamaadka sanadkii 2018, kala duwanaanshaha Axmed iyo Fahmy wuu xoogeystay. Si kastaba ha noqotee, wuxuu Fahmy uga maqnaa CAF duruufaha jiradiisa ee cudurka kansarka maskaxda, laakiin wuxuu ku soo laabtay bishii Maarso 2019 kadib safarkii daaweynta, wuxuuna go’aansaday inuu u diro cabasho dhammaan xadgudubyada Guddiga anshaxa ee FIFA iyo Guddiga Fulinta ee CAF oo ka dhan ah madaxweynahiisa, taas oo ku kalliftay madaxweynaha xiriirka inuu shaqada ka eryo Fahmy.
Dadka Twitter-ka wax ku qora ayaa naxariis Allaha uga baryey marxuum Fahmy, oo dacwado musuqmaasuq ah ku soo oogay madaxweynaha CAF geeridiisa ka hor, iyagoo tilmaamay in shaqadiisa iyo tacabkiisa aanu khasaarin, wuuna ku saxsanaa kuna kalsoonaa talaabooyinkiisa “xaqiisana maanta ayaa loo soo celiyey” isagoo kashifay Axmed Axmed.